Gbasara anyị - Zaili Engineering Machinery Co., Ltd.
Zaili Injinia Machinery Co., Ltd. bụ otu n'ime ndị ọkachamara na-emepụta nke ndị na-akụda mmiri, hydraulic ịkwa osisi, hydraulic grapples, di na nwunye na ngwa ngwa. Na-elekwasị anya na nyocha, mmepe na nrụpụta nke onye na-emebi ihe, ụlọ ọrụ ahụ ewebatala ihe karịrị usoro iri atọ nke nrụpụta dị elu na akụrụngwa nyocha n'ụlọ na mba ofesi. The ụlọ ọrụ nwere mbara mmepụta usoro dị ka machining, nnyocha, nzukọ, ule, mbukota wdg Iji oge a nhazi management ụzọ, ngwaahịa nwere àgwà nke elu mma, elu kwụsie ike, nụchara anụcha nkà ịrụ na ogologo anwụ ngwa ngwa, ma na-ọma nabatara ahịa na ụlọ na mba ọzọ.
The ụlọ ọrụ mechaa mba ọkọlọtọ ISO9001-2000 na OA asambodo. Ọ nwere nlezianya mma management usoro na zuru okè mgbe-sales ọrụ. Kemgbe nguzobe ya, ụlọ ọrụ ahụ eguzobewo mmekọrịta mmekọrịta ogologo oge na ọtụtụ ụlọ ọrụ na-emebi emebi ụlọ na Korea.
Companylọ ọrụ anyị na-agbaso mmụọ mmụọ nke ịdị n'otu "ịdị n'otu, ịrụsi ọrụ ike, pragmatism na ihe ọhụrụ" na nkà ihe ọmụma azụmahịa nke "iguzosi ike n'ezi ihe, nhazi, arụmọrụ na nkwụsi ike". Ọ na-ekwusi ike mgbe niile na ọdịmma ndị ahịa dị karịa ihe niile, ma na-achọ ịbụ ụlọ ọrụ ọkachamara maka imebi hama. "Mee ọrụ ahụ nke ọma ma mejuo ndị ọrụ" bụ nchụso anyị na-enweghị atụ!
Mmụọ ụlọ ọrụ: nọgidesie ike, gbalịsie ike maka izu okè, na-agabiga karịa oge niile
Ọhụụ ụlọ ọrụ: ịbụ onye na-emepụta ihe ndị na-emepụta ihe na-emepụta ihe
Mgbaru Ọsọ: Iji bụrụ onye nrụpụta na - eduga ndị na - akpụ haịdrọlik
Nzube ahia: iguzosi ike n'ezi ihe, ihe ohuru dika nkpuru obi
Usoro iwu dị mma: jiri nlezianya, nọgide na-emeziwanye, nye ndị ahịa ngwaahịa dị mma na ọrụ na-enye afọ ojuju, nke mere na ụlọ ọrụ a na-emeziwanye usoro njikwa mma.
Mkpọrọ Mkpọrọ Mkpọrọ, Shiee N'ihi Excavator, Hb Series emebi, Control valvụ N'ihi emebi, Pulverizer N'ihi Excavator, Crusher N'ihi Excavator,